Diyaarad GarGaar siday oo ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Diyaarad GarGaar siday oo ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne
Diyaarad xamuul ah ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, waxaana ka badbaaday saddex qof oo isugu jiray labadii duuliyayaal iyo engineerkii dayaaradda
Dayaaradaan burburtay ayaa waxaa iska lahaa sharikadda Bluebird Aviation ee dalka Kenya. Waxayna ka soo kicitinta magaalada Jabuuti. Waxayna siday raashiin sida uu HOL u xaqiijiyey agaasimaha duulista raydka ah Axmed Macalin Xasan. Ilaa iyo hadda ma cadda xamuulka ay wadday oo laga yaabo in uu shilkaan keenay. Dayaarad labaad oo sidoo kale ka soo kicitinka dalka Jabuuti oo ay lahaayeen sharikadda Bluebird ayaa u soo gudubtay magaalada Moqdisho ka dib markii ay ku dagi-weysay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beled weyne.
Shilkii ugu xumaa wuxuu ka dhacay afartii bishii May, kadib markii lasoo riday diyaarad shixnad gargaar sidday oo ku degeysay garoonka diyaaradaha ee Bardaale, 5 qof ayaa ku dhintay shilkaas
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyay diyaarad sidday gargaar loogu tala-galay dadkii ay saameeyeen fatahaaddii magaalada Beledweyne oo ku dhacday Madaarka Ugaas Khaliif ee duleedka magaalada Beledweyne .
“ma jiraan khasaare dhimasho ah oo maanta ka dhashay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaa la soo badbaadiyay 3 ruux oo saarnaa diyaaradda, waa nasiib –darro in maanta garoonka Beledweyne uusan laheyn wax gaadiid dab demis ah, waxaana eeddaas iska leh ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliya” ayuu Cali Jeyte Cismaan u sheegay weriyayaasha, isagoo ku sugan halka diyaaraddu ka dhacday.
Dhinaca kale waxaa goobta tegay saraakiisha ciidamada AMISOM, iyadoo dadka rayidka ah laga fogeeyay halka diyaaradda bur burkeeda yaallo.
Shacabka magaalada Beledweyne ayaa dhowr jeer soo jeediyay in la dhiso garoonka diyaaradaha oo muhiim u ah dadka deegaanka, illaa iyo haddana ma jirto jawaab rasmi ah oo ay dowladda Soomaaliya illaa iyo hadda ka bixisay cabashada dadkaasi
Diyaarad GarGaar siday oo ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne was last modified: July 14th, 2020 by Admin